को बालकनी मात्र पहिलो नजर मा यो धेरै सजिलो देखिन्छ छ लागि सफलतापूर्वक सुन्दर फूल टिप्न। तर वास्तविकता यो त छैन। प्रकाश, provetrivaemost, को बालकनी को आकार: को बिरुवाहरु नयाँ स्थानमा राम्रो accustomed हुनुहुन्छ, तपाईं nuances धेरै खातामा लिनुपर्छ। साथै, उत्पादक अक्सर वर्ग हेरविचार को सरल आवश्यकताहरु संग, तिनीहरूले रसीला छैन बढ्न र कम मनैदेखि अपेक्षा गरेको भन्दा बढी ब्लूम सुरु, विशेष गरी terraces लागि सिर्जना देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ।
को बालकनी लागि फूल बढ्दै, धेरै सजिलो गल्ती ल्याण्डिङ रूपमा गर्न, र trimming गर्दा। र यदि बोट सुरुमा सही, एउटा सुन्दर संरचना चयन भएको थियो र प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। त्यसैले, तपाईं चयन गरिएको क्षेत्र रोपण सुरु गर्नु अघि, तपाईं फूल रोपेर गर्न सबै भन्दा राम्रो छ कुन कुरा विचार गर्न आवश्यक छ।
बढ्दै कडा, संकुचित र कम बढ्दै: को उत्पादक बीचमा तीन समूह मा बिरुवाहरु को एक भिन्नता छ। यो कि माटो, पानी र प्रकाश को लागि कुनै विशेष आवश्यकताहरु, तिनीहरूले नदेखाउनुहोस् भने गर्न सकिन्छ। को बालकनी लागि फूल हल्का-मायालु र छाया-मायालु दुवै हुन सक्छ। तर यो बिरुवाहरु या त प्रशस्त मात्रामा बढ्दै थिए भनेर संरचना, वा विपरित, संकुचित चयन गर्न राम्रो छ। विभिन्न प्रकारका फूल प्रत्येक अन्य संग मिश्रण छैन।
त्यसैले, फूल कस्तो उत्कृष्ट गीत सिर्जना गर्न बालकनी बाहिर बढ्न? समूह कडा विस्तार bushy बिरुवाहरु ठूलो अर्को हेर्न भनेर निम्न प्रकार समावेश:
- Surfiniya। यो प्रकारको छ ampelnye petunias। यसको फूल विभिन्न आकार र रंग को हुन सक्छ, सबै भन्दा अक्सर तिनीहरूले,7सेमी को एक व्यास संग बिगुल आकारको छन्। सबै उप प्रशस्त फूल फरक surfinii। यी फूल बालकनी लागि हो पूर्ण टीन र प्रकाश गर्न माग छैन, ड्राफ्ट सहनु। त्यहाँ धेरै सुन्दर लघु उप surfiny, परिदृश्य डिजाइनर बीच धेरै लोकप्रिय छन् जो छ।
- ओपेरा कार्टून अक्षर झाडी। यसको प्रजाति, शायद सबैभन्दा बालकनी लागि लोकप्रिय। यो, रंगीन सानो फूल संग strewn छ फूल अवधिमा एक रमणीय बोट छ एक डेजी जस्तै। Tsvetkov हरियो पात देख्न सक्नुहुन्छ कि धेरै छ। सामान्यतया यो ओपेरा कार्टून अक्षर को संरचना मा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ।
- ferulolistnaya श्रृंखला। यो एक अविश्वसनीय छ सुन्दर बोट लैस पात, सौंफ समान छ। फूल - ताराहरु उज्ज्वल पहेंलो - थप आकर्षण यस प्रकारको थप्नुहोस्।
संकुचित देखि, गरिबी sprawling बिरुवाहरु निम्न छन्:
- Ageratum हस्टन। फर tangles सदृश एक धेरै फ्लफी हिउँ-सेतो तन्तु संग सुन्दर बोट। त्यहाँ नीलो फूल संग प्रजाति छन्।
- Lobelia बलियो। सुन्दर नीलो तन्तु संग सानो यस प्रकारको को बालकनी सबै अन्य फूल अप फेंक हुनेछ। तिनीहरूलाई घाम पक्ष - सबै भन्दा राम्रो विकल्प। Lobelia सबै वर्ष दौर फूल।
- Sanvitaliya recumbent। असामान्य creeping बोट। पहेंलो फूल, सूर्यमुखी समान।
आफ्नो बालकनी मा एक सुन्दर संरचना सिर्जना गर्न, तपाईं अग्रिम के प्रकार तपाईं त्यहाँ देख्न चाहन्छु मा विचार गर्न आवश्यक छ। लगातार लाउने, नियमित पानी र hoeing: तर यो तपाईं हेरविचार सबै अवस्था अनुरूप चल्नै पर्छ, स्थापित बिरुवाहरु र खुसी खुशबू पर्याप्त छैन। मात्र तरिका तपाईं एउटा सुन्दर बगैचा जस्तै, घर मा एउटा सानो कुना सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
कोकोआको गुण। कोकोआ पाउडर कस्तो उपयोगी छ?
दाँत crowding उपचार र कारण
दंगा पुलिसमा कसरी पुग्नको बारेमा कथा